Ezra 8 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
8 Ke kaloku ezi yayiziintloko zezindlu zooyise+ nokubhaliswa ngokomlibo wokuzalwa+ kwabo benyuka nam ekuphumeni eBhabhiloni ebudeni bolawulo lukaArtashashta+ ukumkani: 2 Koonyana bakaFinehasi,+ nguGershom, koonyana bakaItamare,+ nguDaniyeli;+ koonyana bakaDavide,+ nguHatushe; 3 koonyana bakaShekaniya, koonyana bakaParoshe,+ nguZekariya, yena wabhaliswa namadoda alikhulu elinamashumi amahlanu; 4 koonyana bakaPahati-mowabhi,+ nguEliyeho-henayi unyana kaZerahiya, ekunye namadoda angamakhulu amabini; 5 koonyana bakaZatu,+ nguShekaniya unyana kaYahaziyeli, ekunye namadoda angamakhulu amathathu; 6 yaye koonyana baka-Adin,+ nguEbhedi unyana kaYonatan, ekunye namadoda angamashumi amahlanu; 7 koonyana bakaElam,+ nguYeshaya unyana ka-Ataliya, ekunye namadoda angamashumi asixhenxe; 8 yaye koonyana bakaShefatiya,+ nguZebhadiya unyana kaMikayeli, ekunye namadoda angamashumi asibhozo; 9 koonyana bakaYowabhi, nguObhadiya unyana kaYehiyele, ekunye namadoda angamakhulu amabini aneshumi elinesibhozo; 10 yaye koonyana bakaBhani,+ nguShelomiti unyana kaYosifiya, ekunye namadoda alikhulu elinamashumi amathandathu; 11 yaye koonyana bakaBhebhayi, nguZekariya unyana kaBhebhayi,+ ekunye namadoda angamashumi amabini anesibhozo; 12 yaye koonyana baka-Azegadi,+ nguYohanan unyana kaHakatan, ekunye namadoda alikhulu neshumi; 13 yaye koonyana baka-Adonikam,+ abo babengabokugqibela, nanga amagama abo: nguElifelete, nguYeyeli noShemaya, bekunye namadoda angamashumi amathandathu; 14 yaye koonyana bakaBhigevayi,+ ngu-Utayi noZabhudi, bekunye namadoda angamashumi asixhenxe. 15 Ndabaqokelela emlanjeni+ ongena eAhava;+ saza saqhubeka simise iinkampu apho iintsuku ezintathu, ukuze ndibaphicothe abantu+ nababingeleli,+ kodwa andizange ndifumane namnye woonyana bakaLevi+ apho. 16 Ngako oko ndathumela kuEliyezere, uAriyeli, uShemaya noElnatan noYaribhi noElnatan noNatan noZekariya noMeshulam, abo baziintloko, nakuYoyaribhe noElnatan, abayaleli.+ 17 Ndandula ndabanika umyalelo ngokuphathelele uIdo lowo uyintloko endaweni kaKasifiya, ndaza ndabeka amazwi emlonyeni+ wabo ukuba bathethe noIdo nabazalwana bakhe amaNethini+ endaweni yaseKasifiya, ukuba asizisele abalungiseleli+ bendlu yoThixo wethu. 18 Ngoko basizisela, ngesandla esilungileyo+ sikaThixo wethu esasiphezu kwethu, indoda enengqiqo+ yakoonyana bakaMahali+ umzukulwana kaLevi+ unyana kaSirayeli, ongulo, uSherebhiya+ noonyana bakhe nabazalwana bakhe, ishumi elinesibhozo; 19 noHahabhiya ekunye noYeshaya wakoonyana bakaMerari,+ abazalwana bakhe, noonyana babo, amashumi amabini. 20 Ababevela kumaNethini, abo uDavide neenkosana babanika inkonzo yabaLevi, yayingamaNethini angamakhulu amabini anamashumi amabini, onke ayetyunjwe ngamagama awo. 21 Ndaza ndabhengeza ukuba kuzilwe ukutya apho kuMlambo iAhava, ukuba sizithobe+ phambi koThixo wethu, ukuze sifune kuye indlela elungileyo+ kuthi nakubantwana bethu+ nasempahleni yethu yonke. 22 Kuba ndaziva ndineentloni ukucela umkhosi wamajoni+ nabakhweli-mahashe+ kukumkani ukuba baze kusinceda nxamnye notshaba endleleni, ngenxa yokuba sasithe kukumkani: “Isandla+ soThixo wethu siphezu kwabo bonke abo bamfunayo ngenxa yokulungileyo,+ kodwa amandla akhe nomsindo wakhe+ zinxamnye nabo bonke abo bamshiyayo.”+ 23 Ngoko ke sazila+ saza sacela+ kuThixo wethu ngokuphathelele oku, kangangokuba wasabela sakumbongoza.+ 24 Ngoko ndahlula kwiintloko zababingeleli ishumi elinesibini, oko kukuthi, uSherebhiya,+ noHashabhiya,+ bekunye nabazalwana babo abalishumi. 25 Ndabalinganisela isilivere negolide nempahla,+ umnikelo wendlu kaThixo wethu lowo wawunikelwe ngukumkani+ nabacebisi+ bakhe neenkosana zakhe nawo onke amaSirayeli+ awayefumaneka. 26 Ngaloo ndlela ndalinganisa esandleni sabo amakhulu amathandathu anamashumi amahlanu eetalente zesilivere nekhulu lempahla yesilivere+ exabisa iitalente ezimbini, nekhulu leetalente zegolide, 27 nezitya ezincinane zegolide ezixabisa iidarike eziliwaka neempahla ezimbini zobhedu oluhle, olubomvu ngokumenyezelayo, olunqweneleka njengegolide. 28 Ndaza ndathi kubo: “Niyinto engcwele+ kuYehova, yaye iimpahla+ ziyinto engcwele, yaye isilivere negolide zingumnikelo wokuzithandela kuYehova uTHIXO wookhokho benu. 29 Hlalani niphaphile nize nilinde de nizilinganise+ phambi kweentloko zababingeleli nabaLevi neenkosana zoobawo bakaSirayeli eYerusalem, kwiiholo zokudlela+ zendlu kaYehova.” 30 Yaye ababingeleli nabaLevi bamkela ubunzima besilivere negolide neempahla, ukuba babuzise eYerusalem endlwini yoThixo wethu.+ 31 Ekugqibeleni sanduluka kuMlambo iAhava+ ngosuku lweshumi elinesine lwenyanga yokuqala+ ukuba sihambe siye eYerusalem, yaye kanye isandla soThixo wethu saba phezu kwethu, kangangokuba wasihlangula+ entendeni yotshaba lwethu nakweyabo babelalele endleleni. 32 Ngoko safika eYerusalem+ saza sahlala apho iintsuku ezintathu. 33 Yaye ngosuku lwesine salinganisa isilivere negolide+ neempahla+ endlwini yoThixo wethu esandleni sikaMeremoti+ unyana kaUriya umbingeleli ekunye noEleyazare unyana kaFinehasi noYozabhadi+ unyana kaYeshuwa noNowadiya unyana kaBhinuwi+ abaLevi, 34 ngenani nangobunzima bayo yonk’ into, emva koko bonke ubunzima babhalwa phantsi ngelo xesha. 35 Abo babephuma ekubanjweni, abathinjwa bangaphambili,+ basondeza imibingelelo etshiswayo+ kuTHIXO kaSirayeli, ishumi elinesibini leenkunzi zeenkomo+ zakhe wonke uSirayeli, amashumi asithoba anesithandathu eenkunzi zeegusha,+ amashumi asixhenxe anesixhenxe eenkunzi zeemvana, ishumi elinesibini leenkunzi zeebhokhwe+ njengomnikelo otshiswayo, yonk’ into njengomnikelo otshiswayo kuYehova. 36 Sandula sanikela imithetho+ kakumkani kumabamba kakumkani+ neerhuluneli+ ezazingaphaya koMlambo,+ yaye babanceda abantu+ nendlu yoTHIXO oyinyaniso.